> Resource > Video > Sida loo sameeyo MOV (Quicktime) yar
Mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa QuickTime MOV videos kor u qaadataa meel aad u badan ku wadid aad u adag ama Qalabka telefoonada gacanta, ama aadan rabin in waqti dheer file badan in qof diraya, waa in aad MOV yar. Si lagaaga caawiyo in aad si fudud loo gaaro in, Wondershare Video Converter noqon kartaa doorasho wanaagsan. Waxaa kuu saamaxayaa inaad sameyso MOV QuickTime yar by qabsado goobaha video ah si waafaqsan rabitaanka. Si laguugu sahlo, si toos ah u hoos u video baaxadda by barnaamijka sidoo kale waa la heli karaa. Hadda hubi soo socda hage tallaabo-tallaabo in ay bartaan sida loo sameeyo MOV yar iyadoo la isticmaalayo qalab awood badan.
1 dar bartilmaameedka files QuickTime MOV
Download oo ay maamulaan barnaamijkan. Markaas riix "Add Files" button xitaa folder file aad dooro files MOV aad rabto in aad si loo yareeyo xajmiga. Waxa kale oo aad iyaga si toos ah u soo jiidi kartaa galay uu furmo suuqa hoose. Marka dhammaan faylasha waxaa lagu daray barnaamijka, waxaad bedeli kartaa magaca faylka ama double u riix si aad iyaga ku eegaan.
2 Bilow yareeyo xajmiga files QuickTime MOV
Markaas riix batoonka "Settings" ee geeska midig hoose ee barnaamijka. Daaqadda pop up ka, aad gacanta hoos u dhigi karaan goobaha sida xal, heerka yara, heerka jir, encoder oo ka mid ah files MOV diirada si aad u yar. Fiiro u yeelo in, hoos-beegyada uu sidoo kale soo saari doonaan hoose video tayo leh, sidaa darteed waa in aad isugu dheeli tiran u dhexeeya tayada iyo baaxadda. Waxa kale oo aad ka badalan karaa in "Tirada yar" tab iyo ha barnaamijka si toos ah uga dhigi files MOV yar. Ka dib markii in, guji "OK" si loo xaqiijiyo goobaha.
Hadda waxaad tegi doonaa dib u furmo suuqa hoose ee barnaamijka. Halkan waxaad ka heli doontaa in lagu qiyaasay baaxadda file ah file wax soo saarka noqdo yar marka la barbar dhigo mid ka mid ah asalka ah. Waxaad riix kartaa icon Play in ay ku eegaan saamaynta saarka video ah.
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, kaliya badbaadin file cusub. By default, dhammaan faylasha la gediyay waxa loo badbaadiyay Wondershare Video Converter Ultimate maktabadda ku wadid aad C. Haddii aad rabto in aad sheeg folder kale, riix badhanka Browse ee Folder Output (waa hoose ee barnaamijka). Markaas abuuro folder cusub ama doorato mid ka mid ah ee hadda jira, iyo riix OK.
Markaasuu ku dhacay "Beddelaan" si ay u bilaabaan hawlaha qaab beddelidda. Marka dhamaystiran, guji "Open Folder" si aad u hesho files cusub. Hadda ayaa midkood aad gali kartaa in YouTube ama ka mid ahaa in email saaxiibada la wadaaga.